सगरमाथा सफाइ अभियान टोली आधार शिविर प्रस्थान, छिट्टै काम थाल्ने – Dainik Samchar
सगरमाथा सफाइ अभियान टोली आधार शिविर प्रस्थान, छिट्टै काम थाल्ने
March 18, 2021 239
काठमाडौं, ५ चैत । सगरमाथा सफाई अभियानका १३ जनाको टोली आधार शिविर तर्फ प्रस्थान गरेको छ । सो टोली नाम्चेबाट आधार शिविरतर्फ प्रस्थान गरेको र दुई तीन दिनमै आधार शिविरमा पुग्ने नेपाली सेनाले सो सफाइको जिम्मा पिक प्रमोसन ट्रेकिङ एजेन्सीका प्रवन्ध निर्देशक बाबु शेर्पाले बताउनुभयो ।
सरकारले यस वर्ष ६९ जना माउन्टेन गाइडको सहयोगबाट छ वटा हिमालको फोहोर संकलन गर्ने भएको छ । आउने बैसाख र जेठको आरोहण सिजनमा पारेर नेपाली सेनाले सगरमाथा, ल्होत्से, पुमोरी, मकालु, आमादव्लम र धौलागिरी हिमालबाट ३५ टन फोहोर संकलन गर्ने जनाएको छ ।
आधारशिविरदेखि अन्तिम क्याम्पसम्म १८ र आधारशिविर क्षेत्र १७ टन फोहोर संकलन गरी ल्याउने तयारी गरेको नेपाली सेनाका फोहोर संकलन सम्पर्क व्यक्ति मेजर अदिति कार्कीले बताउनुभयो । अन्तिम क्याम्पसम्म पुगेर फोहोर संकलन गरिने यो पहिलो कार्य भएको उहाँ बताउनुभयो । फोहोर संकलनसँगै भेटिएका शवहरु आधारशिविर ल्याएर व्यवस्थापन गर्ने समेत योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको छ
Prevब्युटिफूल’ नायिका उपासनाको लोभलाग्दो फड्को [१५ तस्बिर]
Nextमहिनावारी हुँदा सहन नसक्ने गरि तल्लो पेट दुखे के गर्ने ?
वातावरण मा अझै सुधार नआएकाले थप ७ दिन विद्यालय बन्द गर्ने मन्त्रालयको निर्णय ?
१० जना हिरोहरुसँग सुत्दै हिड्ने केटी हो रेखा थापा : शिल्पा (4858)